यी हुन् नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हात धोएर लागिपरेका नेपाल-भारतका 'इयू एजेन्ट'हरु Nepalpana - Nepal's Digital Online
यी हुन् नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हात धोएर लागिपरेका नेपाल-भारतका 'इयू एजेन्ट'हरु
नेपाल पाना जेठ १७ २०७८
काठमाडौं । नेपालका कुनै न कुनै ठूला घटना र परिवर्तनमा विदेशीको हात रहेको बताइन्छ । अझ सत्ता निर्माण र परिवर्तनमा समेत विदेशी इन्ट्रेस्ट महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालमा जनचाहना विपरीत धर्मनिरपेक्षता, संघीयता जस्ता एजेण्डा लादिएका छन् परिवर्तनका नाममा । यसमा नेपालीको हैन बाह्य शक्तिको स्वार्थ जोडिएको छ ।
दातृ निकायको सहयोगबाट चलेको नेपालमा अधिकांश जानेबुझेका व्यक्तिहरु विभिन्न प्लेटफर्ममार्फत विदेशीसँग जोडिएका छन् । आर्थिक प्रलोभन अथवा सत्ता, शक्ति स्वार्थका कारण जानी नजानी विदेशीको 'एजेन्ट' बन्न पुगेका छन् । जसका कारण सनातन धर्म मास्ने, नेपाली सरम्परा संस्कृति निमिट्यान्न पार्ने, बाह्य प्रभाव बढाउने, आत्मनिर्भर होइन परनिर्भर बनाउने, पलायन हुन बाध्य पार्ने, राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने काम तिनै एजेन्टबाट भइरहेको छ ।
यसमा खासगरी पश्चिममा राष्ट्रहरुको प्रमुख भूमिका छ । आफै सीनमा नदेखिने तर आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि सहयोगका नाममा, प्रलोभन देखाएर विभिन्न व्यक्तिलाई परिचालन गर्ने काम पश्चिमाहरुले गरेका छन् ।
दुई ढुंगा बिचको तरुल अर्थात भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपालमा अस्थिरता मच्चाएर विश्वका दुई ठूला राष्ट्रमा दख्खल दिने पश्चिमा रणनीति रहेको छ । यसका लागि पहिला नेपालको सनातन धर्म संस्कृति नास गरेर अस्थिरता मच्चाउने र अनि छिमेकीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति छ । तर यसमा दुबै छिमेकी सचेत छन् ।
दुखद कुरा के छ भने यसमा भारतकै एक समूह लागेको छ । हालै भारतीय बुद्धिजीवी भनाउँदाहरु जो भारतीय कांग्रेसको सरकार हुँदा सत्तामा थिए, उनीहरुले पश्चिमाको लाइनअनुसार लेख लेखेर नेपाल सरकारमाथि हमला गरेका छन् । भारतमा कांग्रेस आई क्रिश्चियन धर्मप्रति उदार मानिन्छ ।
त्यसको सरकार हुँदा जनयुद्ध गरेको माओवादीले समेत भारतमा शरण पाएको थियो । विदेशी हस्तक्षेपमा बाधक बनेको नेपालको राजसंस्था र सनातन धर्म फाल्न माओवादीलाई भारतको कांग्रेस आइले पश्चिमासँग मिलेर प्रयोग गर्यो । काँग्रेस आईमा सोनिया गान्धी जो दक्षिण एसियामा चर्चको अम्मा भनेर चिनिन्छन् । इटाली निवासी सोनियालाई राजीव गान्धीसँग विहे गरेर क्रिश्चियन मिसनरी बनाएर भारतमा पठाइएको थियो ।
जसले भारतमा क्रिश्चियन धर्मलाई बढावा दिने र हिन्दु धर्म सिध्याउने प्रयास गरिन् । भारतबाट सुरु भएको प्रयास माओवादीमार्फत नेपालमा पनि गरियो । यसमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु पनि प्रयोग भए ।
हालै जेएनयु विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एसडी मुनीको सल्लाहमा भारतका कम्युनिष्ट विचारधाराका लेखक अतुल ठाकुर र नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द हिन्दुमा आर्टिकल लेखे ।
भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन ओलीलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।
जसरी भारतमा सोनिया गान्धीले धर्म मास्ने काम गरिन, त्यसलाई करेक्सन गर्न अहिले भाजपाको मोदी सरकारले प्रयास गरिरहेको छ त्यसैगरी नेपालमा माओवादीहरुले धर्म मास्ने काम गरे ।
यसमा कांग्रेस एमालेकै नेताले साथ दिए । अहिले यसलाई जगेर्ना गर्ने काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।
भारतमा मोदीले धर्म संरक्षण गर्दा केही बोल्न नसक्ने एसडी मुनीले नेपालमा ओलीले धर्म रक्षा गर्दा भारतले प्रयोग गर्यो भन्ने ।
पश्चिमाबाट परिचालित मुनी आफू बोलेका हैनन यो त पश्चिमाहरु बोलेका हुन । ओलीको कदमा उनीहरु चिन्तित छन् । त्यहीँ बाहिरबाट दबाब सिर्जना गर्न भारतका बुद्धिजीवी बनाउँदाहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हुन त बाबुराम भट्टराई जेएनयुमै पढेका हुन् । उनका गुरु हुन् एसडी मुनी । अहिले गुरुचेला मिलेर ओली विरोधी द हिन्दुमा आर्टिकल लेखेर बाह्य दबाब बढाउन लागिपरेका छन् ।
यसमा भाजपा विदेश विभाग प्रमुखले एक कट्टर कम्युनिस्टले आफ्नो असफलताको दोष अरुलाई दिने? भनेर काउन्टर दिइसकेका छन् ।
बाबुराम त भारतको शरणमा बसेर धर्म मास्ने, संस्कृति मास्ने एक अभियन्ता नै हुन् । अहिले धर्म संरक्षणमा लागेको ओली सरकारलाई दिनहुँ गाली गर्ने, प्रतिगमन भनेर विदा गर्नुपर्छ भनेर गफ चुटेर बसिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिनाथमा पूजा गरेपछि, सुनको ज्वलहरी चढाएपछि र राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरेपछि नेपाल र भारतका इयुसम्वद्ध सबै समूह एक भएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध आक्रामक भएका छन् । चौतर्फी हमलामा उत्रिएका छन् ।
युरोपियन एजेण्डा नेपालमा स्थापित गर्न र जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भड्काउन उद्धत छन् ।
जसमा नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह पनि छन् । जो भारतले हटाउदै, पश्चिमाहरु रिसाएका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भयभित पार्दे आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्न पल्किएका थिए तर तिनलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले ओलीले बालुवाटार प्रवेशमै निषेध गरेपछि उनी हात धोएर लागेका छन् ।
उनी माओवादी जनयुद्धदेखि नै पैसा उठाउने, विदेशीबाट पैसा लिएर सनातन धर्म संस्कृति सिध्याउने अभियानमा लागेका थिए । अहिले धर्म संरक्षक ओली हटाउन उनी परिचालित भएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई त अब भन्नै परेन । कहिले भारतका लागि कहिले चीनका त कहिले पश्चिमाका लागि कम्फरटेबल सरकार बनाउने भनेर हाकाहाकी भन्ने प्रचण्डको विगत सबैलाई भारतमा सेल्टरमा बसेर नेपालको धर्म संस्कृति सनातन परम्परा सिध्याउने, परनिर्भर बनाउने, जातीय अस्थिरता मच्चाउने, विकृति भित्र्याउने कामको नेतृत्व उनले नै गरे ।
माओवादीलाई सन् १९९६ मा भारतमा कांग्रेस आइको सरकारले शरण दियो । पश्चिमा तथा कांग्रेस आईको नेतृत्वमा प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपाल तहसनहस भयो ।
माओवादीले जनयुद्धका नाममा संस्कृत शिक्षा हटायो । पढाउने शिक्षकलाई गोली ठोकेर झुण्ड्याएर निर्ममतापूर्वक हत्या गरयो ।
हिन्दुको मन्दिरमा हमला गरयो । विदेशीको रणभूमि बनाए नेपाललाई ।
जसको दुष्परिणाम जनताले दुख भोगिरहेका छन् । अहिले पनि ओली हटाउन प्रचण्डले विभिन्न विदेशी एजेण्टहरुसँग मिलेर हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । क्रिश्चियन धर्मको होली वाइनका प्रवर्द्धक माधव नेपालसँग हात मिलाएका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा पुरै पश्चिम घुमेर आर्थिक अपचलन गर्ने उपेन्द्र यादवसँग गठबन्धन बनाएका छन्, ओली हटाउन ।
यसरी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा युरोपियन युनियनको भूमिका जून छ त्यसमा नेपाल र भारतका दुबै देशका एजेन्टहरु एकदम खुलेर लागेका छन् वर्तमान ओली सरकार विरुद्ध ।
इयुको अभियानमा एमालेका सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल पनि कुनै न कुनै रुपमा सामेल छन् । सुवास नेम्वाङ तिनै हुन जसले धर्म निरपेक्षताका लागि ठूलो भूमिका खेले । ठूलो लाभ पनि लिए । त्यसैकारण उनी अहिलेसम्म पदमा कायम छन् ।
धर्मनिरपेक्षताको उपहार उनले दुई कार्यकाल सभामुख पाए । पहिलो विघटनमा अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ता भएर ठोस प्रतिरक्षा नगर्दा संसद विघटन बदर हुन पुगेको थियो । उनको प्रस्तुति फितलो रह्यो । यसमा पनि पश्चिमा प्रभाव रहेको सूचना बालुवाटार पुगेपछि ओलीले उनलाई हटाए ।
कांग्रेस नेता गगन थापा पनि पश्चिमा राष्ट्रका विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
उनलाई त बेला बेला पश्चिमाहरुले पढ्न भनेर पनि बोलाउने गरेका छन् । उनी अमेरिकी एजेन्ट रहेको त विकिलिक्सले दस्तावेज नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसका अलावा उनी अमेरिका मात्रै होइन पुरै पश्चिमाको भरपर्दो युवा लिडर हुन नेपालका लागि ।
गगन थापा नै हुन जसले हिन्दु धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको चर्को स्वरले विरोध गर्दै आएका छन् । परिवर्तनको नाममा धर्म निरपेक्षताविरुद्ध बोल्दा उनको रगत उम्लिन्छ । यसैबाट थाहा हुन्छ कि उनी को हुन् भन्ने ।
थापा पनि अहिले पश्चिमा स्वार्थअनुसार ओलीलाई जसरी पनि हटाउने लाइनमा लागेका छन् । उनी निरन्तर धर्मविरोधी ट्वीट गरिरहन्छन् ।
पश्चिममा अभियानमा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण, प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, आफूलाई विश्लेषक भन्ने तुलानारायण साह, सीके लालहरु पनि सक्रिय छन् ।
खासगरी मधेसमा क्रिश्चियानिटी बढावा दिने, विभिन्न एनजिओ लगेर सशक्तिकरण नाममा धर्मान्तरण गर्ने, मधेसमा युवाहरु उचालेर आन्दोलन गराउने, अस्थिरता मच्चाउने काम उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
अहिले पनि उनीहरु जसपाको एक समूह महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोहरुले मधेस माग सम्बोधनका लागि पहल गर्दा ओलीले झुक्याएको भनेर विरोध गर्नमै व्यस्त छन् ।
मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि एक सुको नभाच्ने थुतुनो चलाएर जथाभावी बोल्न बानी परेका उनीहरुलाई ओलीले माग पूरा गरिदिएकोमा मन परेको छैन ।
अहिले भारतबाट हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार प्रशान्त झा पनि ओली हटाउने अभियानमा लागेका छन् । उनले द हिन्दुस्तान टाइम्समा पत्रिका मार्फत हुने न हुने सिलसिलेवार लेख र समाचार लेखेर नेपालका सञ्चारकर्मी र बुद्धिजिवीलाई मसाला दिने काम गरेका छन् । उनी पनि कांग्रेस आइ निकट हुन् । जो पश्चिमासँग सम्बन्ध राख्छ ।
नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन भूमिका खेलका पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जीत रे, श्याम शरण, अतुल ठाकुरहरुले पनि अहिले ओली हटाउन भूमिका खेलिरहेका छन् ।
विभिन्न लेख लेखेर, नेपालका पत्रिकामा लेख्न लगाएर ओलीविरुको माहोल सिर्जना गर्न लागिपरेका छन् ।
इयुबाट आर्थिक तथा अन्य फाइदा लिएर र भारतीय कांग्रेसको परामर्शमा यिनीहरुले नेपालमा वितण्डा मच्चाउने, आतंक मच्चाउने, जातीय द्वन्द्व भड्काउने, प्रयास र धर्मविरोधी कामहरु गर्दै आएका छन् ।
त्यसैअन्तर्गत ओली सरकारको पनि विरोध गर्दैछन् । यिनीहरुले नेपालको हिन्दुहरुको संस्कृति, आस्था र परम्परालाई सिध्याउने, सनातन धर्म मासेर द्वन्द्व मच्चाएर स्वार्थपूर्ति गर्ने काममा लागिरहेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री ओली भिडिरहेका छन् ।
सनातन धर्म रक्षाको दिशातिर अगाडि बढेका छन् ।
जेठ १७, २०७८ सोमवार १०:५६:३५ बजे : प्रकाशित
# इयू एजेन्ट